10 ဥရောပရှိအလှဆုံးရှုထောင့်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ဥရောပရှိအလှဆုံးရှုထောင့်များ
ခမ်းနားထည်ဝါစွာစိမ်းလန်းသောချိုင့်, ဘုံဗိမာန်, နှင့် သာယာလှပကျေးရွာများ, ဥရောပမှာရှိတယ် အများအပြားရင်သပ်ရှုမောဖွယ်သောနေရာများ လည်ပတ်ရန်. တစ်ခုချင်းစီကိုနေရာတိုင်းသင်သည်ညီအစ်ကိုတစ် ဦး သို့တိုးမြှင့်လာသည်နှင့်အမျှသင့်ကိုခံစားရစေသည်’ Grimm ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်, ပြီးနောက် 10 ဥရောပရှိအလှပဆုံးရှုထောင့်များသည်နတ်သမီးပုံပြင်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်.
1. ပြင်သစ်တွင်အလှဆုံးရှုထောင့်: Dordogne ချိုင့်
စိမ်းလန်းစိုပြေသောစိမ်းလန်းသောတောင်ကုန်းများ, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Dordogne မြစ်, နှင့်5လက်ခံရရှိကြောင်းအံ့သြဖွယ်ကျေးရွာများ “ပြင်သစ်တွင်အလှဆုံးရွာ” ချီးမြှင့်သည့် Dordogne ချိုင့်ဝှမ်းရဲ့ဥရောပ၌လှပသောအမြင်များထဲကတစ်ခုပါစေ. Castelnaud သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏အချမ်းသာဆုံးရဲတိုက်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်, အနက်ရောင် Perigord ရွာ၏inရိယာ၌တည်ရှိသည်. Dordogne ချိုင့်ဝှမ်းရှိကျေးရွာများသည်အချိန်ကာလအားဖြင့်မပြောင်းလဲသေးပါ, လမ်းတလျှောက်လမ်းလျှောက်သွားသောအခါ, သငျသညျ Knights နှင့်ဒဏ္legာရီအချိန်ပြန်အချိန်ခရီးသွားလာသည်ဟုခံစားရပါလိမ့်မယ်.
ပြင်သစ်တွင်အလှဆုံးရှုထောင့်ဖြစ်သည် ရထားသုံးစွဲနိုင်. သငျသညျထက်နည်းအတွက် Bordeaux ကနေခရီးသွားလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်2နာရီ, သို့မဟုတ်ထက်နည်းအတွက်ပဲရစ်ကနေ6နာရီ. ဤသည်ဝိဇ္ဇာအတတ်အားဒေသတစ်ရက်ခရီးစဉ်ထက်ပိုမိုတန်ဖိုးရှိသည်.
Marseilles မှ Bordeaux ရထားစျေးနှုန်းများ
2. Vernazza, Cinque Terre တောင်တက်လမ်းကြောင်း
Cinque Terre ရှိလှပသောကျေးရွာ Vernazza ၏မြင်ကွင်းသည်တစ်ခုဖြစ်သည် 10 ဥရောပ၌အလှဆုံးအမြင်များ. ဤရောင်စုံရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်5ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကျေးရွာများ, Cinque Terre ၏အံ့ဖွယ်ဒေသ၏ပါဝင်သည်. အလွန်နက်ရှိုင်းသောမြေထဲပင်လယ်ပင်လယ်နောက်ခံလှပသောအိမ်များ, ပန်းချီကဲ့သို့သောအမြင်ဖန်တီးပါ, အထူးသဖြင့်နေဝင်ချိန်အတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်.
Cinque Terre မှဤလှပသောအမြင်ကိုသင်သဘောကျနိုင်သည် တောင်တက်လမ်းကြောင်း အားလုံးဆက်သွယ်သောရှုထောင့်5ကျေးရွာပေါင်း. သင်လမ်းကြောင်းတက်အဖြစ်, သငျသညျစပျစ်ဥယျာဉ်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်, ငါးဖမ်းလှေများ, နှင့် Cinque Terre အားလုံး၎င်း၏ဘုန်းအသရေ၌. အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် Cinque Terre သို့သွားရောက် နွေ ဦး ရာသီနှင့်နွေ ဦး ရာသီတို့တွင်နွေရာသီမှစပြီးတောင်တက်ခြင်းအတွက်အတော်အတန်စိုစွတ်သည်, ဆောင်းရာသီတွင်လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့သွားနိုင်သည်.
Corniglia မှ Vernazza ရထားစျေးနှုန်း
Florence မှ Vernazza ရထားစျေးနှုန်းများ
Bologna မှ Vernazza ရထားစျေးနှုန်းများ
Riomaggiore မှ Vernazza ရထားစျေးနှုန်းများ
3. ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရှုခင်းအများဆုံးရှုထောင့်: Rochers De Naye
ဆွစ်ဇာလန်၏အမြင်များ အများအပြားရုပ်ရှင်နှင့်အနုပညာရှင်တွေမှုတ်သွင်းပါပြီ, ပြီးတော့ Rochers De Naye နဲ့ Vaud ဒေသကိုသင်လည်ပတ်တဲ့အခါ, သငျသညျအဘယ်ကြောင့်နားလည်ပါလိမ့်မယ်. ခရီးသွားအများစုသည် Malatraix တောင်ထိပ်ကိုတက်ကြသည်, Rocher-De-Naye ကနေပိုပြီးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့အမြင်ရှိပါတယ်.
ထိုအရပ်မှဂျနီဗာရေကန်နှင့်နှင်းဖုံးတောင်ထိပ်များကိုသင်ကြည့်ရှုမည် ဆွစ်တောင်တန်း Alps နောက်ကွယ်မှာ. Rocher-De-Naye ရှိလှပသောရှုထောင့်သည်နံနက်စောစောတောင်တက်ရန်စိတ်အားထက်သန်ပါကနေဝင်ချိန်သို့မဟုတ်ပျော်ပွဲစား ၀ င်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။.
4. Mullerthal တိုင်းဒေသကြီး
Mullerthal ဒေသသည်လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတွင်အချစ်ဆုံးသောအမြင်များရှိသည်. ကျောက်ဆောင်ဖွဲ့စည်းမှု, ရေတံခွန်များ, နှင့်မှရွေးချယ်ဖို့အစိမ်းရောင်လမ်းကြောင်း, ကတောင်တက်ပရဒိသုပါပဲ. Mullerthal ကိုဆွစ်ဇလန်နည်းနည်းဟုမကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်, ၎င်း၏အံ့သြဖွယ်ရှုခင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံရှိအလှဆုံးရှုထောင့်သည် Upper-Sure သဘာဝဥယျာဉ်ရှိ River Sure ဖြစ်သည်. သင်တက်တက်ကြွကြွဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်ဤရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောနေရာကိုသင်ခံစားနိုင်သည် Mullerthal Trail လမ်းကြောင်း 1. ဒီတောင်တက်လမ်းကြောင်းကအစိမ်းရောင်မြက်ခင်းပြင်တစ်လျှောက်လှမ်းသွားတယ်, ရေနံချောင်းရဲတိုက်, ကတ ဦး တည်းအောင် 10 ဥရောပ၌အလှဆုံးရှုထောငျ့.
5. ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်အလှဆုံးရှုထောင့်: Moravian Tuscany
ပိုးကဲ့သို့အစိမ်းရောင်လှိမ့လယ်ကွင်း, ချက်သမ္မတနိုင်ငံရှိ Moravia ဒေသသည်စွဲမက်ဖွယ်ဖြစ်သည်. နွေရာသီအတွက်စိမ်းလန်းသော, blooming, နှင့်နွေ ဦး ရာသီ၌ရောင်စုံ, Moravian Tuscany ၏အရောင်များသည်ယခုနှစ်ရာသီများနှင့်ပြောင်းလဲသည်. ဒါကြောင့်, အချိန်မရွေးသင် Moravia သွားပါ, သင် Tuscany ရဲ့အမွှာလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များရလိမ့်မယ်.
ဥရောပ၌ဤအံ့ဖွယ်ရှုထောင့်သည်ပရာ့ဂ်မှတစ်ရက်ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်. သာဒိမြို့၏သာယာလှပသောကျေးရွာများ, နှင့် Karlin နှင့် Morave, Moravian လယ်ကွင်းများ၏အကောင်းဆုံးအမြင်များကိုဆက်ကပ်.
6. သြစတြီးယား, Alpbach
နှင်းဖုံးနေသောတောင်များနောက်ခံရှိသစ်သားခြံများ, Alpbach ရွာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်. Alpbach ၏သေးငယ်တဲ့ပါကျေးရွာသြစတြီးယားရဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အကောင်းဆုံးဒေသတစ်ခုမှာတည်ရှိသည်: Tyrol. ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရေတံခွန်များ, ကလေးများနှင့်အတူအတွေ့အကြုံရှိတောင်တက်သို့မဟုတ်မိသားစုများအတွက်တောင်တက်လမ်းကြောင်း, သြစတြီးယားရှုခင်းနှင့်သဘာဝကိုလေ့လာရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်.
ဖြည့်စွက်ကာ, သငျသညျသြစတြီးယားရဲ့အနွေးဆုံးသောရေကန်ထဲမှာနှစ်ပါနိုင်ပါတယ်, အရာလည်းဒီသာယာလှပရွာအနီးမှာတွေ့ရှိရသည်. သြစတြီးယားရှိ Alpbach ၏အလှဆုံးရှုခင်းသည်တိုတောင်းလှသည် ရထားစီးနင်း ဝေးလေဆိပ်ကနေ.
Landeck Ischgl ရထားစျေးနှုန်းမှဗီယင်နာ
မြူးနစ်မှ Landeck Ischgl ရထားစျေးနှုန်း
Salzburg မှ Landeck Ischgl ရထားစျေးနှုန်းများ
Zurich မှ Landeck Ischgl ရထားစျေးနှုန်း
7. ဂျာမနီမှာအလှဆုံးရှုထောင့်: Neuschwanstein ရဲတိုက်
ဥရောပ၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အကောင်းဆုံးရှုထောင့်များစာရင်းသည်ရဲတိုက်၏အမြင်တစ်ခုမပါဘဲပြည့်စုံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. ဂျာမနီရှိ Neuschwanstein Castle အထင်ရှားဆုံးရဲတိုက် ဂျာမနီနှင့်ဥရောပအတွက်အရှိဆုံးမှော်အမြင်များထဲကတစ်ခုပေးထားပါတယ်.
Neuschwanstein ရဲတိုက်၏လူကြိုက်အများဆုံးရှုထောင့်မာရိရဲ့တံတားကနေဖြစ်ပါတယ်. သို့သျောလညျး, သူကလူစည်ကားလာပြီးကျော်ကြားတဲ့ရှုထောင့်ကနေဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး. ထိုကွောငျ့, တောင်ကုန်းကိုတက်ပြီး Marienbrucke ရှုထောင့်ကိုကျော်ဖြတ်သင့်တယ်. ဂျာမနီရှိအလှဆုံးရှုခင်းသည်ဇီဂတ်လမ်းဖြစ်သည်, တစ် ဦး ခြံစည်းရိုးပလက်ဖောင်းကနေ.
8. နယ်သာလန်, Zaanstad ကျေးရွာ
ဟော်လန်သည်၎င်း၏ tulips နှင့်လေရဟတ်များကြောင့်ကျော်ကြားသည်, တူးမြောင်း, နှင့်ချစ်စရာကောင်းမြို့များ. ထိုကွောငျ့, နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်လှပသောရှုထောင့်တစ်ခုမှနှစ်ခုစလုံးရှိသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ. သင်နွေ ဦး အတွက်ခရီးသွားလာရန်လုံလောက်သောကံကောင်းနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျ Zaanstad ၏ရွာကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုရပေမည်. ဤတွင်သက်တံ၏အရောင်အားလုံးတွင်ပန်းပွင့်များနှင့်အတူတက်ကြွသောလေရဟတ်များတွေ့လိမ့်မည်.
9. ဟန်ဂေရီမှာအလှဆုံးရှုထောင့်: Budapest ခုနှစ်တွင် Gellertberg ဟေးလ်
ဟန်ဂေရီပါလီမန်၏အမြင်သည်ဘူဒါပတ်စ်၏အကျော်ကြားဆုံးပုံများဖြစ်သည်. သင်သည်ဤရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းကို Gellertberg Hill မှမြင်တွေ့နိုင်သည်. တွင် 235 မီတာ, သငျသညျဒူဘိုင်းမြစ်နှင့်ဘူဒါပက်၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာမြင်ကွင်းကျယ်အမြင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်.
လိမ္မော်ရောင်နေဝင်ချိန်အရောင်များကို, ညအလင်းအိမ်, သို့မဟုတ်ကြည်လင်သောအပြာကောင်းကင်နေနေ့၌, အမြင်များအံ့ are ဖြစ်ကြသည်. ထို့ကြောင့်, Gellertberg ဟေးလ်ရဲ့ရှုထောငျ့ကြှနျုပျတို့၏ကဖန်ဆင်းတော်မူပြီ 10 ဥရောပ၌အလှဆုံးရှုထောငျ့.
10. Dinant ခုနှစ်တွင် Chateau De Crevecoeur
သာယာလှပသော Dinant ကျေးရွာသည်ဥရောပရှိအလှပဆုံးနှင့်ထူးခြားသည့်ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်. Dinant ၏အလှဆုံးရှုခင်း, အသင်းတော်, မြစ်, Meuse ချိုင့်သည် Chateau de Crevecoeur မှဖြစ်သည်, ကြေကွဲဖွယ်နန်းတော်.
ထုံးကျောက်ကျောက်ရှုခင်းကိုလွှမ်းမိုးသည်, ၁၃ ရာစုကတည်းကဒီအထင်ကြီးလောက်သောရဲတိုက်သည် Dinant ကိုသတိမမူမိခဲ့ပါ.
ဘရပ်ဆဲလ်မှ Dinant ရထားစျေးနှုန်းများ
အဆိုပါ 10 ဥရောပရှိအလှပဆုံးရှုထောင့်များသည်အစိမ်းရောင်တောင်တန်းများဖြစ်သည်, ရဲရင့်တဲ့အိပ်မက်ဆိုးတွေသာသွားရဲတဲ့နေရာပါ. အထူးအထူး, ဥရောပအမြင်များကသာမန်ထက်ထူးကဲသောအရာများကိုရှာဖွေသောသူတို့ကိုစောင့်ဆိုင်းသည်, ချွတ် -The- ရိုက်နှက် - လမ်းကြောင်းသောနေရာများ, နှင့်လူအစုအဝေးထဲကနေ.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, သင်၏အားလပ်ရက်အစီအစဉ်ကိုစီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည် 10 ရထားဖြင့်ဥရောပ၌အလှဆုံးရှုထောငျ့.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ ဥရောပတွင်အလှပဆုံးရှုထောင့် ၁၀ ခု” ကိုသင်၏ကွန်ရက်ပေါ်သို့တင်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-viewpoints-europe%2F ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, သင်တို့အား / fr အဆိုပါ / ru ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ် / က de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများနိုင်ပါတယ်.
BeuatifulViewpoints နေခြည် ဥရောပသမဂ္ဂ ရထားခရီးသွား ခရီးသွား အမြင်